समाचार - कार कुञ्जीमा चार छुपे प्रकार्यहरू छन्, आपतकालिन समयमा जीवन बचाउन सक्छ
मात्र oट्याक्सी ढोका कलम
धेरै जसो कारले केवल ट्याक्सी ढोका खोल्न सक्छ जब तपाईं टाढाको कुञ्जी थिच्नुहुन्छ, र मात्र दुई पटक थिचे पछि, सबै ढोका खोल्न सकिन्छ।
केही ड्राइभरहरूले एउटा टाढाको पार्कि lotमा कार लिन्छन्, यदि मात्र क्याब ढोका खोल्नुभयो भने, तिनीहरूले खराब मान्छेहरूलाई गाडीको पछाडिको सिट वा अघिको यात्री सीटको ढोकाबाट कारमा जानबाट रोक्न सक्छन्। त्यसोभए यो जीवन बचाउने समारोह वास्तवमै बहुमूल्य छ, होइन यो विशेष गरी महिला चालकहरूको लागि हो?
कार विन्डो बन्द गर्नुहोस्
कार पार्क गरिसकेपछि, इन्जिन सिधा बन्द गर्नुहोस्, त्यसपछि कारबाट बाहिर निस्कन ह्यान्डब्रेक तान्नुहोस्। तर अचानक पछाडि हेरे, विन्डो वा सनरूफ बन्द गर्न बिर्सिए। तपाईं यस समयमा के गर्नुहुनेछ? यो कारमा फिर्ता हुनै पर्छ, इग्निसन स्विच खोल्नुहोस्, विन्डोज र सनरूफ बन्द गर्नुहोस्, र फेरि कार लक गर्नुहोस्। यो समस्या हो?
वास्तवमा धेरैलाई थाहा छैन कार कार बन्द भए पछि तपाईले रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जीको लक बटन थिच्नु भयो भने कारको शीशा र सनरूफ स्वत: बन्द हुनेछ! केहि कारहरूमा, रिमोट कन्ट्रोल लक फंक्शन प्रयोग हुने बित्तिकै सबै विन्डोजहरू स्वचालित रूपमा माथि र बन्द हुनेछन्। यो समारोह वास्तवमै धेरै व्यावहारिक छ, यो मार्थाको सुसमाचार हो, हाह।
खोज्नुहोस् को छिटो कार
यदि तपाईं आफ्नो कार चाँडै फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, कार कुञ्जीमा बटनले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, जब तपाईं शपिंग मल्ल जानुहुन्छ र भूमिगत पार्कि parkingमा तपाईंको कार पार्क गर्नुहुन्छ, तपाईंले यसलाई लिन जब फिर्ता आउँनुहुन्छ तपाईंले सम्पूर्ण विश्व खोज्नु पर्छ। यस समयमा नडराउनुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो कार खोज्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले केवल कार कुञ्जीमा रातो बटन थिच्नु आवश्यक छ कारलाई आवाज बनाउनको लागि। यसले तपाईंको कार पत्ता लगाउन सजिलो बनाउँदछ, तर सावधान रहन, उद्भव समयको सन्दर्भमा यो प्रकार्य प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यसले अरूलाई असर गर्दछ जब तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ।
धेरै मोडेल रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जीसँग तपाइँले ट्रunk्क स्वचालित रूपमा खोल्न मद्दतको लागि एक बटन छ। ट्रंक अनलक बटनलाई लामो प्रेस गर्नुहोस् (केही कारहरूमा, डबल क्लिक गर्नुहोस्), ट्रंक स्वचालित रूपमा खुल्नेछ। यदि तपाईं सुपरमार्केटबाट बाहिर निस्कनुभयो र तपाईंको हातमा ठूला झोलाहरू बोक्नुभयो भने, यो समयमा धेरै नै व्यावहारिक हुनेछ, र यसले एकल टचको साथ धेरै सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ।